कृष्ण सिटौलादेखि सुजाता कोइरालासम्म सँधैका लागि थन्किने संकेत, अब के जवाफ देला कांग्रेसले ? | suryakhabar.com
Home राजनीति कृष्ण सिटौलादेखि सुजाता कोइरालासम्म सँधैका लागि थन्किने संकेत, अब के जवाफ देला कांग्रेसले ?
कृष्ण सिटौलादेखि सुजाता कोइरालासम्म सँधैका लागि थन्किने संकेत, अब के जवाफ देला कांग्रेसले ?
on: ३१ आश्विन २०७४, मंगलवार ०९:५८ In: राजनीतिTags: अब के जवाफ देला कांग्रेसले ?, कृष्ण सिटौलादेखि सुजाता कोइरालासम्म सँधैका लागि थन्किने संकेतNo Comments
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले यो पटक पार्टीका केही ठुला नेताहरुलाई समानूपातिकतर्फको उम्मेद्वार बनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दिएर भएपनि जित्न सक्ने नेताहरुलाई समानूपातिकतर्फको उम्मेद्वारी बनाइएपछि कांग्रेसभित्र एउटा तप्काले गम्भीर बहस समेत उठान गरिरहेको छ ।
कांग्रेसले लोकप्रिय र प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौलादेखि नेतृ सुजाता कोइराला समेतलाई समानूपातिकको उम्मेद्वार बनाएको छ । सिटौला र कोइराला मात्र होइन, केबी गुरुङ, बालकृष्ण खाँड, दिलेन्द्र प्रसाद बडु,चित्रलेखा यादव, सीतादेवी यादव लगायतलाई समानूपातिकमा थन्क्याएको छ ।
संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फ उठेर विजयी हासिल गर्न सक्ने यी नेताहरुलाई पार्टीले किन समानूपातिकमा लगेर थन्क्यायो ? यो प्रश्नको उत्तर अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ र यसलाई धेरै कार्यकर्ताहरुले बहसको विषय बनाएका छन् । कांग्रेसको यो कदमलाई कार्यकर्ताहरुले बन्धनको रुपमा लिन थालेको देखिन्छ ।
कृष्ण सिटौला, सुजाता कोइराला, बालकृष्ण खाँड लगायतका नेताहरु कांग्रेसभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चर्चित नेताहरु हुन् । उनीहरुले मुलुकका जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट उठेपनि विजयी हासिल गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । तर उनीहरुले समानुपातिकमै चित्त बुझाएका छन् । समानूपातिक उम्मेद्वारमा सिमित हुनुको कारणबारे नेता बालकृष्ण खाँडले भने आफुहरु चुनावी अभियानको नेतृत्व गरेर देशव्यापी रुपमा खटिनुपर्ने भएकोले समानूपातिकतर्फबाट चुनावमा उठ्नुपरेको खुलासा गरेका छन् ।
नेता सिटौला र नेतृ कोइराला लगायतका उम्मेद्वारहरुले भने यो सवालमा मुख खोलेका छैनन् । झापा र मोरङ निर्वाचन क्षेत्र भएका सिटौला र कोइरालाका लागि ती क्षेत्र यसबेला धेरै प्रतिकुल पनि थिएनन् । मोरङ त नेपाली कांग्रेस र कोइराला परिवारको विरासत जोडिएकै ठाउँ हो, तैपनि उनले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत गरिनन् । यो बारेमा उनले मुख खोलेकी छैनन् ।
त्यस्तै शान्तिप्रक्रियाको व्यवस्थापन मुख्य व्यवस्थापककै रुपमा भूमिका खेलेर आएका कांग्रेसका अर्का लोकप्रिय नेता सिटौलालाई पनि झापामा धेरै गाह्रो अवस्था थिएन । पछिल्लो समयमा एमालेको पक्षमा माहोल आएको संकेत देखिए पनि आन्तारिक विवादका कारण एमालेमा झापामा अझै कमजोर देखिन्छ ।
यही बेलामा सिटौलाले समानूपातिकमा बस्ने इच्छा देखाउनु कांग्रेसकै लागि घाटा हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, कांग्रेस केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सितादेवी यदाव, अर्की प्रभावशाली नेतृ चित्रलेखा यादव पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थापित र प्रभावशाली नामहरु हुन् ।
उनीहरुले यो बेला प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर मधेसको राजनीतिमा कांग्रेसलाई थप स्थापित गराउनुपर्नेमा समानूपातिकमा राख्ने निर्णय गलत भएको एकथरी कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको तर्क देखिन्छ । यसले कांग्रेसलाई निकै घाटा पार्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
को–को परे कांग्रेसबाट समानूपातिकमा ?
नेपाली कांग्रेसबाट समानूपातिकमा पर्ने नेताहरुमा कृष्णप्रसाद सिटौला, सुजाता कोइराला, बालकृष्ण खाँड, केबी गुरुङ, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, किशोरसिंह राठोर, कृष्णचन्द्र नेपाली, सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव र पुष्पा भुसाल रहेका छन् ।
त्यस्तै समानूपातिकमा परेका अन्यमा महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, डिला संग्रौला, उमा रेग्मी, मीना पाण्डे र मञ्जु खाण रहेका छन् । त्यस्तै,मृदुला कोइराला, मधु शाही, रीता खनाल, सीता गुरुङ, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, बहादुरसिंह लामा लगायत कांग्रेसको समानूपातिक कोटामा परेका छन् ।
Tags: अब के जवाफ देला कांग्रेसले ?कृष्ण सिटौलादेखि सुजाता कोइरालासम्म सँधैका लागि थन्किने संकेत
इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको निर्वाचनमा विजयी
सिटिजन्सको कामका लागि नगद वितरण कार्यक्रम
३१ आश्विन २०७४, मंगलवार ०९:५८